List Categories and Listings by O: Root - Consumer Reviews and Ratings
Office Rental in Yangon (ရုံးခန်း အငှား) (3)Online Stores (အင်တာနက်ဆိုင်) (30)Online Travel Agents (OTA) (6)Organizations (အဖွဲ့အစည်း) (5)Orphanage (မိဘမဲ့ ဂေဟာ/ကျောင်း) (25)Others (အခြား) (Travel (ခရီးသွား)) (35)Others (အခြား) (Manufacturers (ကုန်ထုတ်)) (28)Others (အခြား) (Entertainment (ဖျော်ဖြေရေး)) (35)Others (အခြား) (People (လူမှုရေး)) (8)Others (အခြား) (Religious (ဘာသာရေး)) (0)	Results 1 - 10 of 66
Ooredoo Myanmar (အော်ရေဒူး မြန်မာ) အဆောင်(၁၀)၊ ဘလောက်(၂)၊
MICT ဝင်း၊ မြန်မာသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ၊ လှိုင်မြို့နယ်။
ပြည်ပ တွင်ဖြစ်လျှင် +95 997 0000234Category:ISP (အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု) Votes2
Odyssey Travels & Tours Odyssey Travels and Tours is newly established but not new in the travel industry as it is founded by experienced and passionate travel operators.We p ...No.221/223, Ground Floor , Bo Aung Kyaw Street , Kyauktada Township, Yangon, Yangon, MyanmarCategory:Tour Operators (ခရီးသွား လုပ်ငန်း) Telephone 01-373199, 01-240545, 09-73187799,09-73197799
OfficeWise | Just another WordPress site No meta description foundCategory:Domains for Sale (ဒိုမိန်း ရောင်းမည်) Votes1
Orientwebs Technologies Orientwebs.com create website. CMS and web application with all information you need and host on orientwebs.com server as you mentionCategory:Uncategorized (အမျိုးအစားမသိ) Votes1
OVCL Myanmar Category:Shipping (သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး) Votes1
Online Family Organization (O.FO) မြန်မာနိုင်ငံရှိ စွန့်ပစ်ကလေးငယ်များ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့Category:Organizations (အဖွဲ့အစည်း) Votes2
Online Myanmar Computer Training Center OMCTC အွန်းလိုင်း ကွန်ပျူတာ သင်တန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော အွန်းလိုင်းကွန်ပျူတာ သင်တန်းကျောင်းဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းတက်ရန် အချိန်မပေးနိုင်သော ဝန်ထမ် ...Category:Training (သင်တန်းကျောင်း) Votes8
One Dollar Fund – Myanmar (ODF Myanmar) The Next Step Together - "​လို​နေ​တာ​တွေ ဖြ​ည့်​ပေး​ပါ၊ နောက်​တစ်​ဆင့်​အတွက် အတူ​ရှိ​ပေး​ပါ"
ODF Myanmar believes that if each member of our ODF My ...Category:NGO, INGO (အသင်းအဖွဲ့) Votes1
ONO (အိုးနိုး) - ONO ဆိုတဲ့ စကားလုံးက အင်္ဂလိပ်စကားပြောက လာတာဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသူတွေဟာ အမှတ်မထင် တခုခု မှားယွင်းသွားခဲ့ရင် ဒါမှမဟုတ် အထိတ်တလန့်ဖြစ်ခဲ့ရင် ' ...Category:People (လူမှုရေး) Votes1
Ooredoo - အော်ရေဒူး Ooredoo Myanmar is the newest operation within the Group. In June 2013, Ooredoo was selected as one of the two successful applicants to be awardedat ...Category:Mobile (မိုဘိုင်း ဖုန်း) Votes4
StartPrev1234567NextEnd	Joomla SEF URLs by Artio